China Shaft Collar, Custom Hardware Vagadziri, Nguva yePulley Suppliers - Jingbang
CNC Machining Zvikamu Gallery
Jingbang Precision inopa akasiyana chaiwo CNC machining sevhisi kune vatengi uye masangano munyika-pasirese. Yedu CNC machining masevhisi anosanganisiraCNC kugaya, CNC kutendeuka, EDM(electric discharge machining) uye kurapwa kwekukuya. Kuti tive nechokwadi chemhando yezvikamu zvedu zvekugadzira, isu tinosanganisa timu yedu yeruzivo neyechokwadi 3-,4- uye 5-axis CNC machining nzvimbo. Pamusoro pezvo, hunyanzvi hwedu hwepamberi hunova nechokwadi chekuti tinokwanisa kudzora chikamu chese mukugadzira machining, Jingbang ine chinangwa chekupa vatengi vepasi rese sevhisi imwe chete kubva.CNC kugadzira, CNC prototyping, CNC kugadzira, kurapa kwepamusoro kusvika pakutumira kwekupedzisira. KuJingbang, yeduISO9001-yakasimbiswaCNC machining sevhisi yakanga yapa mamirioni eCNC machining zvikamu kune vatinoshanda navo nezvinodiwa zvakasiyana zvekukurumidza prototyping, kugadzira mold, CNC zvekurapa uye zvetsika zvigadzirwa.
CNC machining inzira yekugadzira yekushandisa CNC (kombuta nhamba inodzorwa) yakakwirira chaiyo michina yekubvisa mbishi neakasiyana maturusi ekucheka, ayo anodzorwa nechirongwa chekombuta zvinoenderana nekutsanangurwa kweiyo 3D dhizaini. Mainjiniya edu uye machinists anogadzirisa chirongwa chekombuta kukwirisa machining nguva, kupera kwepamusoro uye kushivirira kwekupedzisira kusangana nezvako zvakatemwa. Isu tinokwanisa kugadzira zvikamu zvakasiyana kubva kune prototypes, kugadzirwa kwemazhinji kuumba maturusi neCNC machining.
Jingbang Zvakanakira zveCNC Machining
1. Zvakaitika:Injiniya yedu uye timu yehunyanzvi yaive nemamirioni ezvakaitika kare mapurojekiti, ivo vanokwanisa kudzora zvakaoma uye nemazvo CNC zvikamu mumaindasitiri akasiyana.
2.Kuchinja Kwekukurumidza:isu tichapindura quotation yako mukati maawa makumi maviri nemana. Nezvedu zvazvinoCNC michina, Jingbang ichapedza yakanyatsojeka, inokurumidza kutendeuka zvikamu muzuva rimwe, uye isu tine 99% pa-nguva yekutumira.
3.Kururamisa:isu tinopa yakakwirira-chaiyo CNC zvikamu mukati mekushivirira kwe +/- 0.001-0.005 kugutsa tsika CNC inodiwa.
4.Kusarudzwa kwezvinhu:Jingbang stock inodarika makumi mashanu einjiniya-giredhi epurasitiki uye simbi zvinhu zvevatengi kusarudzwa, iyo yakakodzera kune akasiyana kugadzirwa application uye maindasitiri. Zvishandiso zvedu zvinobva kumapurasitiki seABS, polycarbonate, naironi uye PEEK kusvika kusimbi sealuminium, simbi isina tsvina, magnesium, zingi uye cooper.
5.Custom pamusoro pekupedzisira:Iwe unogona kusarudza akasiyana epamusoro pekupedzisira pane yakasimba simbi uye zvikamu zvepurasitiki kubva kune chaiyo dhizaini dhizaini. Isu tinopa mapeji akasiyana epamusoro senge akajairwa muchina, akatsetseka, bead yakaputika, anodized yakajeka kana ruvara, anodized hard-jasi, simba rakavharwa, electropolished, dema oxide, chromate kutendeuka coating, brushing.
6.Scalability:Jingbang CNC Machining yakanakira kugadzira 1-10,000 zvikamu. Kurumidza kugadzira kuti uwane yakaderera, yepakati nepamusoro vhoriyamu kugadzirwa
Tora Quote Iye zvino
CNC Machining Maitiro
JingbangCNC kugaya sevhisi ichagadzira zvikamu zvakagayiwa zvine maumbirwo akaomarara e3D, nekuwedzera shandisa michini yepamusoro uye maficha kune ese pfungwa, girazi uye zvikamu zvepurasitiki. Iwo akawanda-axis milling muchina anogona kukurumidza kucheka mapurasitiki akasimba uye zvidhinha zvesimbi kuita zvikamu zvekupedzisira zvine hushingi hwekutsungirira. Iyi CNC michina ichaita kutiCNC kugaya process ienderane, yakarurama uye inodzokororwa kune akasiyana maficha uye yakaoma geometries CNC zvikamu. Zvakadai se: chiteshi, maburi, macurves, slots uye angled maumbirwo. Kugaya inzira yakanaka yekushandisa yekukandira kufa uye kuumba jekiseni.
Jingbang CNC lathes inogona kupa yakakwirira-kumhanya uye yemhando chaiyo kutendeuka kwemapurasitiki nesimbi zvebhawa kana block zvinhu. Michina iyi inobvumira zvikwata zvedu kugadzira yakaoma ekunze uye yemukati geometries CNC zvikamu zvine nzvimbo yakatsetseka, kusanganisira dzakasiyana mhando shinda. CNC kutendeuka inzira inoshanda yekugadzira chero akatenderedza maumbirwo ezvikamu, akadai isu shafts, worms, spheres. Kuchinja kwedu kugona kunowanikwa kune prototyping kusvika kune yakakwira-vhoriyamu kugadzirwa. Pamusoro pezvo nzvimbo dzedu dzekuchinjisa dzakaoma dzinogona kushandiswawo kuita akasiyana siyana ekugayo nekuchera panguva imwe chete.
Jingbang CNC machining simbi zvinhu sezvinotevera:
Aluminium Alloy: 2024, 5083, 6061, 6063, 7050, 7075, nezvimwewo.
Mhangura: ndarira 360, 101 mhangura, 110 mhangura, 932 bhuronzi, nezvimwewo.
Titanium Alloy: giredhi 2, giredhi 5, nezvimwe.
Simbi isina tsvina: 303, 304, 410, 17-4, 2205 Duplex, 440C, 420, 316, 904L, nezvimwewo.
Simbi: 4140, 4130, A36, 1018, nezvimwe.
CNC Machining Plastiki
Jingbang CNC machining epurasitiki zvinhu sezvinotevera:
PMMA (Polymethyl Methacrylate kana Acrylic),
CF (Carbon fiber) nezvimwewo.
CNC Machining Surface Inopedza
Jingbang inopa hasha yakafara yekupedzisa sevhisi mushure meCNC machining. Kuti uvandudze CNC zvikamu chitarisiko, pamusoro wakatsetseka, corrosion kuramba kumwe kuita. Nzvimbo yedu inopedza sevhisi inosanganisira: kupenda, electroplating, poda coating, anodizing, polishing, black oxide, conversion coating, bead blasting, abrasive blasting.
Kushandiswa kweCNC Machining
CNC machining application inocheka kune dzakasiyana siyana maindasitiri. Chero kambani kana sangano rinoda kwakaringana, kunoenderana, dzimwe nguva maumbirwo akaomarara anogona kubatsirwa kubva kuCNC machining masevhisi. Tinogona kupaCNC dhizaini & kukurumidza prototyping, kugadzira mold kune yako tsika inodiwa. yedu CNC machining mapurojekiti kubva kumaindasitiri anosanganisira:
Agriculture:midziyo yekurima nemotokari dzepapurazi
Zvemotokari:Yakasiyana-siyana simbi yemotokari zvikamu, zvikamu zvemudhudhudhu uye zvine hukama
Kuvaka:Tsigiro matanda, inorema kuvaka midziyo nezvimwe
Zvemagetsi:zvemagetsi dzimba uye enclosures uye semiconductor zvikamu
General kugadzira:Kugadzirwa kwezvimwe zvikamu zvinodiwa pakugadzira
Kutsikisa:Michina yekudhinda yakasiyana-siyana nemichina
Mishongatitanium uye simbi isina tsvina zvinoshandiswa zvakanyanya mukutarisira hutano kugadzira maimplants, midziyo yekurapa uye maturusi ekuvhiya.
Fekitori yedu yakawanikwa muna 2011 muShenzhen. Fekitori yedu ine 2 floor plant, workshop i4000 square metres, uye hofisi yedu i1000 square metre, tine makambani madiki matanhatu muShenzhen, Chengdu neGermany. Zvigadzirwa zvedu ...
Add: 1 / F, chivakwa B, Nhamba 37, hongqiaotou hengzhao Industrial Zone, Songgang street, Bao'an District, Shenzhen